”Waxaan ku wada hadalnay cod xirfadeed” – Ruushka oo ugu dambayn telefoonka ka qabtay Maraykanka & wixii laga hadlay | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaan ku wada hadalnay cod xirfadeed” – Ruushka oo ugu dambayn telefoonka...
”Waxaan ku wada hadalnay cod xirfadeed” – Ruushka oo ugu dambayn telefoonka ka qabtay Maraykanka & wixii laga hadlay
(Hadalsame) 15 Maajo 2022 – Xoghayaha Gaashaandhigga Maraykanka, Lloyd Austin, ayaa dhiggiisa Ruushanka ku boorriyey “xabad joojin degdeg ah” oo laga sameeyo Ukraine, sida uu sheegay Pentagon, waana wadahadalkii ugu horreeyey ee uu la yeesho dhiggiisa Ruushka tan iyo markii uu dagaalka bilowday.
Austin ayaa hadalkan ku xaqiijiyey bartiisa Twitter-ka, isagoo sheegay inuu la hadlay Wasiirka Difaaca Ruushka Sergey Shoygu markii ugu horreysay tan iyo 18-kii Febraayo.
“Waxaan ku boorriyay xabbad-joojin degdeg ah oo ka hanaqaadda Ukraine, waxaanan carrabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay sii wadista khadadka isgaarsiineed ee labada dal,” ayuu Austin ku yiri tweet-ka.
Wicitaankan ayaa imanaya xilli ay Ciidanka Ruushku sii wadaan weerarka gobolka bari ee Donbas, taasoo keentay in MW Maraykanka ee Joe Biden uu ballanqaado balaayiin doollar oo gargaar ciidan iyo mid aadminnimo ah oo la siinayo nidaamka Kyiv.
Austin ayaa dhowr jeer isku dayey inuu la hadlo dhiggiisa Shoigu tan iyo bilowgii duullaanka Moscow ku ekeysay deriskeeda Febraayo 24, laakiin saraakiisha ayaa sheegay in dhinaca Ruushka uu u muuqday mid aan danaynayn wax wadahadal ah.
Sargaalka Markaykanka ayaa ku tilmaamay codkii ay ku wadahadleen mid “xirfadeed”.
Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa isna sheegay in wicitaanku uu ku dhacay “hindise ka yimid dhinaca Maraykanka”, sida ay faafisay Wakaaladda Wararka ee Ruushka ee TASS.
“Arimo la xiriira amniga caalamiga ah ayaa laga wada hadlay, oo ay ku jirto xaaladda Ukraine.” ayaa lagu qoray TASS, oo soo xiganeysa ilo wasaaradda ah.
Previous article”Nafteenna khatar ku gelin mayno qolofkaas” – Ruushka oo helay meel uu Maraykanka uga adag yahay & lacagta uu ka qaado
Next articleCiidamada Ruushka oo la duubay iyagoo niman waardiye ah inta sigaar ka qaataan kaddibna tooganaya + Video